Ka soo qaad inuu qof ku yiraahdo, waxaad tahay doqon wax ma garad ah!, ma kici laheyd? Ma caroon laheyd ama ma xanaaqi laheyd? | Dayniile.com
Home Warkii Ka soo qaad inuu qof ku yiraahdo, waxaad tahay doqon wax ma...
Ka soo qaad inuu qof ku yiraahdo, waxaad tahay doqon wax ma garad ah!, ma kici laheyd? Ma caroon laheyd ama ma xanaaqi laheyd?
Intaadan jawaabin fiiri ama eeg waxa uu sameeyey, Madaxweyne hore oo Mareykan ah oo la oran jirey Abraham Lincoln.
Waxaa mar dhacday in wasiirkiisii Gaashaandhigga Edwin M. Stanton, uu Madaxweyne Lincoln ku tilmaamay, inuu yahay doqon garaad xun, wuxuuna ka carooday wasiirku markuu amray Madaxweyne Lincoln inuu madaxda ciidamada qaarkood isku beddelo isagoo ku raali gelinayey dad siyaasiyiin ah,
Wuxuu wasiirku diiday inuu fuliyo amarkaas, waliba wuxuu ku daray caay ama af lagaado iyo weliba dhaliil uu u jeedinayo Madaxweynahiisa isagoo ku tilmaamay inuu yahay doqon caqligaab ah, maxaa yeelay wuxuu amray kala bedelka ciidanka waqti aan loo baahneyn.
Markii Madaxweyne Lincoln maqlay caaydii loo soo jeediyey ma caroon ama ma xanaaqin ee wuxuu yiri; “haddii uu Wasiir Stanton sidaa igu sheegay waan ahay, waana laga yaabaa inuu iga jid leeyahay, marka waxaan eegayaa si aan u xaqiiqsado arrinkaas. Markaas buu u tagay wasiirkii aflagaadeeyey,
Wuxuu ku qanciyey wasiir Stanton, madaxweyhiniisa in kala beddelkii uu soo jeediyey aanu waqtigan ku habooneyn, markaas buu Madaxweyne Lincoln ka noqday amarkii.
Madaxweyne Lincoln wuxuu oggolaaday dhaliishii loo soo jeediyey oo dhan, maxaa yeelay wuxuu ogaaday in dhaliisha loola jeeday dhismo iyo toosin keliya.
Marka waxaa inala gudboon inaan dulqaad yeelano oo soo dhoweyno dhaliisha noocaas oo kale ah ee loola jeedo dhismaha iyo danaha ummadda in lagu toosiyo,
Waxaa la yiraahdaa dadka caqligaabka iyo doqomada ah keliya ayaa ka carooda ama xanaaqa haddii wax yar oo gef ah ama canaan ah loo jeediyo, ninka wax garadka ah wuxuu jecel yahay inuu ogaado waxa lagu canaananayo si uu u saxo gefkiisa.
Buuga: How to Stop Worrying and Start Living
Previous articleRoobabkii Deyrta oo ka curtay Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Next articleXildhibaan Mahad Salaad oo si kulul kaga hadlay Dagaalka Dhuusamareeb eedayna u jeediyay Ahlusuna